SongRec, unofficial mutengi kuti aite Shazam paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Shazam inonzwika kujairika kwauri here? Right, uyu mubvunzo. Yakave iriko kwemakore mazhinji uye ikozvino iri yeApple ndiyo inonyanya kushandiswa app munyika kuziva nziyo. Pamusoro pezvo, pane dzimwe nguva apo patinogona kuishandisa kuti tizive zvikamu zvemufirimu, kushambadza kana kutora chikamu mukusimudzira, asi simba racho ndere kutitaurira zviri kutamba. Kubva pakombuta, kushandisa Shazam zvakati omei, asi kune Anwendung yeLinux inotibvumidza kuti tizive nziyo nekukurumidza, nyore uye nemazvo. Zita rako, RwiyoRec.
Sezvatinoverenga mukati yako GitHub peji, SongRec ndizvo unofficial Shazam mutengi weLinux izvo zvakanyorwa muRust. Kushanda kwayo kuri nyore, zvinoita zvakafanana neiyo yepamutemo app. Ukangotanga, iko kunyorera kuri kutoteerera kune izvo zvirikutamba kwakatenderedza kuti munguva pfupi utiudze zita rerwiyo. Kunyangwe ichokwadi zvakare kuti zvingangoita kuti imwe sisitimu yekushandisa inotikumbira mvumo yekuwana maikorofoni uye kune vamwe tinofanirwa kuratidza iyo "Microphone yekuisa" tab uye sarudza imwe sarudzo.
Chii chinonzi SongRec
RwiyoRec mabasa anosanganisira anotevera:
Ziva odhiyo kubva maikorofoni.
Kana tikachiisa, inoziva odhiyo yeimwe faira inoenderana.
Inogona kushandiswa nezvose zviri zviviri mushandisi interface uye yekuraira mutsara.
Inopa runyorwa rwe inozivikanwa rwiyo nhoroondo iyo inogona kutumirwa kune CSV faira.
Inoenderera mberi nziyo yekutsvaga kubva kumakrofoni, izvo zvinogona kunge zvakanaka, semuenzaniso, kana tichida runyorwa rwe nziyo dzakaparidzirwa pachirongwa cheredhiyo.
Mikana yekugadzira kunyepedzera kubva murwiyo iyo, kana ichiridzwa, inogona kupusisa Shazam kuti afunge kuti ndiyo rwiyo ruri mubvunzo. Izvi handina kuzviedza, asi pachangu ndinonzwa kuti zvapera.
SongRec ndizvo inowanikwa kubva kwakasiyana masosi, uye iyo yekumisikidza mirairo iri pane yavo GitHub peji. Seye mushandisi wepakeji Flatpak, Ini ndinofunga sarudzo yakanakisa nekuti nemabatiro ainoita uye nekuchena kwayakaita inowanikwa paFlathub, asi aya mafungiro ako. Pane Arch Linux-based operating system tinogona kuwana SongRec muAUR, uye repository yeUbuntu uye zvigadzirwa zvinowanikwawo:
Iine SongRec pane yako Linux PC, hapachazovipo rwiyo runokupukunyuka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » SongRec, unofficial mutengi kuti aite Shazam paLinux
MuLinux zvinoshandira imwe, zvimwe hazvishande
Iyi ndiyo kesi yangu, uye zvinoitika kwandiri zvakanyanya uye kazhinji nechinhu ichi cheSO
Asi hei, ndizvo zvazviri, kusvikira iwe uine mari yeMac….
gpg: hapana yechokwadi OpenPGP dhata yakawanikwa.
Faira "/usr/lib/python3/dist-packages/apt/cache.py", mutsetse 587, mukugadzirisa
apt_pkg.Error: E: Iyo repository 'http://ppa.launchpad.net/marin-m/songrec/ubuntu hirsute Release' haina faira reKuburitsa.
Panguva yekubata kweiri pamusoro yakasara, kumwe kusarudzika kwakaitika
Pakupedzisira ndakaiisa muDebian kuburikidza neCargo / ngura
Linux inoita kuti hupenyu hwako huome, asi pakupedzisira panogara paine munhu akangwara kupfuura iwe uye agadzirisa dambudziko, ...
(tsime, kazhinji nguva dzose)
tichaona kana zvichishanda
Yakanakisa super inoshanda basa rayo, yakaedzwa mulinux mint .. ndinokutendai zvikuru. Ongorora: Mushure mekuwedzera repository isu tinofanirwa kugadzirisa (sudo apt-get update) kuti ikwanise kutorwa nekuiswa.